TinEye: Reverse Image Kutsvaga
Mugovera, Chivabvu 16, 2020 Mugovera, January 2, 2021 Jenn Lisak Golding
Sezvo akawanda uye akawanda mablog uye mawebhusaiti achiburitswa zuva nezuva, zvinowanzo netsa kubiwa kwemifananidzo iwe yawakatenga kana yawakagadzirira yako wega kana yehunyanzvi kushandisa. TinEye, inodzosera kumashure injini yekutsvaga, inopa vashandisi mukana wekutsvaga chaiyo url yemifananidzo, kwaunogona kuona kuti kangani mifananidzo yakawanikwa pawebhu uye kwayakashandiswa.
Kana iwe wakatenga mufananidzo wesitoko kubva kune sosi senge yedu inotsigira Depositphotos, kana iStockphoto or Getty Images, iyo mifananidzo inogona kuratidza iine mimwe mhedzisiro. Nekudaro, kana iwe ukatora pikicha kana kugadzira chifananidzo chinotumirwa pamhepo, ndiwe muridzi wemufananidzo uyu.
Kana iwe ukasapa zvakajeka kupa mushandisi mvumo yekushandisa mifananidzo yako kana ivo havataure yako pikicha kana iwe ukaiisa munzvimbo senge Creative Commons, ipapo une kodzero yekutora matanho epamutemo kune avo vanhu.
Zvimwe zvezvinhu zvikuru zve TinEye dzinosanganisira:
Indexes mifananidzo zuva nezuva yemigumisiro yekutsvaga zvirinani, angangoita mabhiriyoni maviri kusvika zvino
Inopa vekutengesa API kuti iwe unogona kusanganisa pamwe neshure kumagumo kwesaiti yako
Offers plugins kune akawanda mabhurawuza ekutsvagisa kutsvaga
Yose zvayo, TinEye zvinoita kuti zvive nyore kune vamwe vanhu kuchengetedza mifananidzo yavo uye midziyo yemagetsi. Ita shuwa yekunongedza mifananidzo iwe iwe kana yawakagadzira uye nekumhan'ara izvo zvakabiwa.
Tags: kutsvaga kwemifananidzoinjini yekutsvaga mifananidzodzosera mufananidzo wekutsvagatineye
May 19, 2011 pa 1: 02 PM